सिन्धुपाल्चोकमा भेटियो दूध दिने गोरु, यसरी दुहियो गोरु (भिडीयो हेर्नुहोस) – Butwal Sandesh
सिन्धुपाल्चोकमा भेटियो दूध दिने गोरु, यसरी दुहियो गोरु (भिडीयो हेर्नुहोस)
On ८ आश्विन २०७७, बिहीबार ०२:३९ By Butwal Sandesh
सिन्धुपाल्चोक / गोरुले दुध दिएको समाचार पढ्दा जोकसैलाई पनि अचम्म लाग्न सक्छ । तर गोरुले पनि दुध दिएको छ । सिन्धुपाल्चोकमा गाईले जस्तै गोरुले दुध दिएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्वर ३ इचोकका किसान सोनाम तामाङ पाख्रिनको गोठमा रहेको गोरुले दुध दिएको हो । ‘भुकम्प गएको बर्ष २०७२ सालदेखि यो गोरुले दुध दिन सुरु गरेको किसान सोनामले जानकारी दिए ।
गोरुले दुध दिएको थाहा पाएपछि सोनामको गोठमा स्थानीयहरुको घुइँचो लाग्यो । स्थानीयहरुले ढोगभेटी चढाउँदै गोरुको दर्शन गर्थे । सोनामले पालेको दुध दिने गोरुको नाम सिन्दुरे हो । सिन्दुरे गोरुलाई सबैले भगवान् भन्दै दर्शन गर्न थालेपछि सोनाम पनि दंग परे । गोरुले दुध दिएको देख्नु त टाढाको कुरा सोनामले सुनेका पनि थिएनन् ।
छोराहरुले गोरुको सरसफाइ गर्दा दुध आएको सोनाम बताउछन् । दुध दिन थालेपछि सिन्दुरे गोरुलाई जोत्न परेन । ‘सबैले भगवान् भनेका छन्, जोत्ने कुरा आयो त ?’ सोनाम भन्छन्, ‘यसको काम बस्ने खाने मात्रै हो अहिले ।’ सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय पत्रकार उनको गोठमै गए । गोरुले दुध दिएको समाचार बनाए । हेलम्बु गाउँपालिकाले पनि गोरुले दुध दिएको थाहा पाएपछि चासो देखायो ।
गाउँपालिकाले मन्दिर बनाएर दुध दिने गोरुको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै अन्यत्र नबेच्न सोनामसँग आग्रह गर्यो ।
PREVIOUS POST Previous post: कुन दिशामा सिर राखेर सुत्नाले सुख प्राप्त हुन्छ?, कुन दिशामा सुत्दा बे*फाईदा? जानिराखौ !
NEXT POST Next post: सँधै धनको अभाव गराउँछ मानिसका यी ५ गलत बानीले, कतै तपाईमा त छैन यस्तो बानी